အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးခြား စောက်ရမ်းကျွမ်းသူ ဆရာကြီးတစ်ပါး | Hash Tech Guru
အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးခြား စောက်ရမ်းကျွမ်းသူ ဆရာကြီးတစ်ပါး
အရင်နေ့က Focus and Commitment ရယ် Freelance နဲ့ Soft Skill တွေကို ရေးတာ အကြောင်းရှိတယ်… ကျနော့်သင်တန်းမှာက Placement Test ရယ်လို့မထားပေမဲ့ Test သေးသေးလေးတွေ မြုတ်ထားတယ်… သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာကို Website မှာသေချာရေးပေးထားတယ်… အဲ့ရေးပေးထားတဲ့ Website မှာကို ဒီတိုင်းပဲ ရှပ်ပြီး ဖတ်ရင်တောင် သိနိုင်လောက်တဲ့ Information တွေကို ဖုန်းထဲမှာ လာမေးရင် ပြန်မဖြေဘူး… Website ပဲ ဖွင့်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်… Web Development အတန်းတက်မဲ့လူက Website မဖွင့်တတ်ရင် အလကားပဲမို့လား.. Facebook က ကြော်ငြာမှာလဲ တကွက်လောက် ချန်ထားလိုက်တယ်.. Website ကို သွားကြည့်ကို ကြည့်မှ ရမဲ့ အကွက်လေးတွေ ထည့်ထားတယ်..
တလောက သင်တန်းအသစ်ဖွင့်ခါနီး မကင်းရာမကင်းကြောင်းထဲက ချာတိတ်တယောက် အတန်းလာအပ်တယ်… Website မှာကော FB က Post မှာကော လိပ်စာသေချာရေးပေးထားတာတောင် သူ့ခမျာ မရှာတတ်ရှာဘူး.. ဒီကောင် နယ်ကဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ထင်လိုက်တာ တန်းနေတာပဲ… အဲ့မတိုင်ခင် ဖုန်းဆက်တော့လဲ အဝေးသင်နဲ့ Day ဘာတက်ရမလဲ ဆရာတဲ့.. ဆရာ့ သင်တန်းချိန်နဲ့ ညှိပြီး ဘာတက်မလဲ ရွေးမှာဆိုတော့ လန့်သွားတယ်.. ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဆင်ပြေတဲ့ဟာရွေးပါ.. ကျနော်တော့ မပြောတတ်ဘူးလို့ပဲ ဖြေလိုက်တယ်… အခန့်မသင့်ရင် သူ့အတွက် ကိုယ်က သမိုင်းတရားခံကြီး ဖြစ်မဲ့ ကိစ္စကိုး
သင်တန်း ရောက်လာတော့ မေးမြန်းကြည့်တော့ ဆရာသမားက Computer တက္ကသိုလ်က External ဖြစ်လို့ မတက်တော့ပဲ ထွက်လာတာတဲ့… ချာတိတ်က အပြင်သင်တန်းတွေ တက်ပြီး IT ဘက်ကို လုပ်ချင်နေတာ… ကိုယ့်လိုကောင်မျိုး တွေပြန်ပြီ ဆိုပြီး ပြုံးမိတာပါပဲ…
ထင်ထားသလိုပဲ သင်တန်းတက်မယ်.. အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့… ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ ဘွဲ့မရရင် သို့မဟုတ် စောက်ရမ်းဂေါ်တဲ့ Skill မရှိရင် မင်းကို အလုပ်မခန့်ဘူးနော်ဆိုတော့ Development ကို Freelance တဲ့… ကိုရန်နိုင်မြင့် သူဖြတ်သန်းလာတာတွေ သူ့အကြောင်း အခန်းဆက် ရေးထားတာတွေကြည့်ပြီး အရမ်းအားကျတာပဲတဲ့…
ဒါနဲ့ စမေးရတယ်… မင်း စောက်ရမ်းဂေါ်ပြီး ပညာတွေတတ်သွားတော့ Freelance လုပ်ရင် မင်းကို ဘယ်ကောင်က Project ပေးမှာလဲ မေးတော့ အ သွားကော… ကျောင်းကော ပြန်မတက်တော့ဘူးလားဆိုတော့ HND လိုဟာမျိုးတက်ပြီး B.I.T ယူမယ်.. နိုင်ငံခြားသွားပြီး ကျောင်းတက်မယ်တဲ့… ဘာတက်မှာလဲဆိုတော့ Computer ပဲတဲ့… ပြောစရာရှိတာက နိုင်ငံခြားကမှာ သွားသင်တော့ ပိုပြီးတတ်လို့လားဆိုတော့ ဒီသင်ရိုးထဲက စာတွေပဲဟာ… နိုင်ငံခြားသွားပြီး ချီးပါလဲ ဒီချီးပဲ… ဒီနိုင်ငံမှာပါလဲ ဒီချီးပဲ.. ဟိုမှာ အိမ်သာက စောက်ဆင့်မြင့်ရင် ဖင်အော်တို ဆေးပေးတာပဲ ရှိမှာပဲ… ကျောင်းက သေချာမသင်ပေးလို့ဆိုပြန်တော့လားဆိုတော့ စာသင်တာ သိပ်မကွာပါဘူး.. Language Barrier နဲ့ဆို နားမလည်တာချင်း သိပ်မထူးပါဘူး… Internet က ပြန်ရှာပြီး ပြန်လေ့လာရမှာပဲ… အဲ့ဒါမျိား ပိုက်ဆံတွေ အကုန်ခံပြီး နိုင်ငံခြားသွားတက်မဲ့ အစား ဒီမှာပဲ ဆက်တက်ပေါ့.. Facility ကွာတယ်ပြောလို့လဲ မရဘူးလေ.. Computer သမားအဖို့ အင်တာနက်နဲ့ Computer တလုံးရှိရင် အကုန်ပြီးနေပြီပဲကို.. တခြားဘာာရပ်တွေတော့ မသိဘူး.. Computer နဲ့ ပတ်သက်တာကတော့ ဘာသိချင်လဲ အကုန်သိရနေတာပဲဟာ
တခြားမဟုတ်ဖူး.. လူငယ်တွေ ထုံးစံ… စနစ်ကြီးက လီးစနစ်ကြီး… သေချာလဲမသင်ပေးဘူးဆိုတာရယ် လွတ်လပ်တာရယ်ပေါင်း… ညဘက် ဂိမ်းဆော့.. ကျောင်းမှာ အလေလိုက်.. စာမေးပွဲကျတော့ ကျောင်းကိုပိုအမြင်မကြည် Blame ကော… အပြင်က Professional တွေကို တွေ့… Inspire ဖြစ်ပြီး သူတို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရင် သူတို့လို ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ..ကိုယ်တွေ ငယ်ငယ် Mark Zuckerberg လိုကျောင်းထွက်ပြီး ဂူအောင်း သိုင်းကျင့်ရင် စောက်ရမ်းအောင်မြင်ချမ်းသာ တိုးတက်လိမ့်မယ်ထင်နေတာ
ကိုရန်နိုင်မြင့်ကို အားကျပြီး သူ့လို နည်းပညာပိုင်း တတ်ကျွမ်းချင်ရင် သူ့လို ဖြစ်ချင်ရင် သူ့လို Focus နဲ့ Commitment လိုတယ်… ထောက်ပံ့ပေးမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လိုတယ်… အချိန်အခါကောင်းလိုတယ်.. ဇွဲ လုံလ ဝီရိယ ကံ ဉာဏ် အကုန် အခိုက်သင့်ဖို့ လိုတယ်ဟ… သူ အောင်မြင်တာပဲ မြင်တာ… မအိပ်ရတဲ့ ညတွေ… ဘေးက ထောက်ပံပေးနေတဲ့ အဖေနဲ့ အမေ ဆရာသမားတွေ သူယ်ချင်းတွေကိုပါ မြင်အောင်ကြည့်… သူမွေးလာတဲ့အချိန်နဲ့ ကိုယ်မွေးလာတဲ့အချိန်နဲ့လဲ ကွာသေးတယ်
ဂူအောင်းပြီး သိုင်းကျင့်လိုက်လို့ သိုင်းပညာတွေ စောက်ကျိုးနည်းထူးချွန်ပြီးရင် မင်းကို ဘယ်ကောင်က Project ပေးမှာလဲဆိုတော့ အ သွားကော… Freelance နဲ့ Startup ထောင်ဖို့ကို Discourage လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်ဘဝနဲ့ဆိုင်တာကိုတော့ ထီထိုးသလို မလုပ်သင့်ဘူး.. Freelance လုပ်မယ်ဆိုလဲ ကိုယ့်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ project အပ်မဲ့ လူကို ညွှန်းပေးဖို့ အသိအကျွမ်းများဖို့လိုတယ်… မိုးပျံအောင်တော်နေလဲ ဘယ်ကောင်မှ မသိရင် ဘာမှ လုပ်မရဘူး… နိုင်ငံခြားက Project လုပ်မယ်ဆိုလဲ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်တဲ့ကောင်အတွက် ဘယ်မလဲ English စာ? Startup လုပ်မယ်ဆိုလဲ အဲ့ဒါတွေ အကုန်လိုပြန်ကောလေ… သွား Pitch မယ်ဆို အိမ်တွင်းအောင် Introvert အတွက် ဘယ်လို Pitch လဲ စိတ်ဝင်စားစရာ… အိမ်က ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့လားဆိုတာတောင် အဆစ်ပါဦးမယ်..
အောင်မြင်တဲ့ ကောင်တွေ အောင်မြင်တာပဲ မကြည့်နဲ့.. သူတို့ကတော့ သူတို့ မအောင်မြင်ခင် ဖင်ပတ်ခံရတာတော့ ဘယ်သူပြောပါ့မလဲ… လုပ်မယ်ဆိုလဲ အကုန်စွန့်ပြီး တလမ်းမောင်းပဲ လုပ်မယ် ဖောင်ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ ချသာချ… အားပေးတယ်.. တဇွတ်ထိုး တဇောက်ကန်းတွေ မရှိပဲ ကမ္ဘာကြီးက မပြောင်းလဲဘူး
အဲ့လောက်သတ္တိမရှိဘူး.. အမွေလဲ သိန်း တထောင်လောက် ရဖို့မရှိဘူး.. အိမ်ရဲ့အခြေအနေက ဖင်ယားလို့ မရဘူး စွန့်စားလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ Safe ဖြစ်မဲ့ နည်းလမ်းရှာတော့ ကိုယ်လူတို့ရေ… ကျနော် ဘာလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး အကိုလို့ လာမေးရင်တော့ ငါလဲ မသိဘူး.. သမိုင်းတရားခံတော့ လာမငှားနဲ့နော့…
ကိုယ်တော့ စွတ်မိုက်လိုက်တာ တည်ငြိမ်ဖို့ နေရာတစ်ခုရဖို့ ၁၀ နှစ်နီးပါး ကြာတယ် 😁 အဲ့တုန်းကတော့ ပညာရေး စနစ်ကြီးကို ဖြိုချပြီး Corporate တွေဆိုတာ Evil Boss တွေလို့ ထင်နေခဲ့တုန်းက ကာလပဲ 😂
Edit: သင်တန်းလာတက်တဲ့ ငတိကတော့ နယ်ပြန်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်မယ်တော့ ပြောသွားလေရဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်က ကိုယ့်ကို ပုံနှင့်တကွ ရှု